Hurghada - मिश्र मा सबै भन्दा लोकप्रिय रिसोर्ट, अद्भुत लाल समुद्र तट, आकर्षक परिदृश्य र विभिन्न ठाँउहरु लागि प्रसिद्ध छ। यसको क्षेत्र स्थित हो भर आधुनिक होटल, पर्यटक सहज, अनुकूल कर्मचारी, सुन्दर समुद्री तट र सूर्य गर्न तत्पर गर्न सक्नुहुन्छ। के Hurghada सबैभन्दा राम्रो होटल? हामी तपाईंलाई, तिनीहरूलाई केही बताउन हुनेछ जस्तै5* Albatros महल र एक्वा Vista Resort र स्पा। Hurghada मा छुट्टी बिस्तारै समुद्र, गर्न प्रवेश sloping, बलौटे समुद्री तट आकर्षित सुन्दर दृश्यहरु र धेरै मनोरञ्जन।
Albatros महल होटल5*
Hurghada मा राम्रो होटल सिद्ध छुट्टी लागि सबै अवस्था समावेश, र5* Albatros महल हलिडे संग धेरै लोकप्रिय छ। यो अचम्मको जटिल, सेवा र मनोरञ्जन को एक किसिम संग एक वास्तविक उद्यानलाई। होटल यसको अचम्मको वास्तु टुकडी, लक्जरी अपार्टमेन्ट, रेस्टुरेन्ट र बारहरू, उच्च गुणवत्ता सेवा को एक महान विकल्प संग प्रस्ट हुन्छ। Albatros महल5हवाई अड्डा देखि केवल पन्ध्र मिनेट छ *, शहर केन्द्र हिंड्न 20 मिनेट लाग्छ। होटल जटिल 576 सहज कोठा, आधुनिक डिजाइन र सबै आवश्यक अवस्था संग बनाएको छ। प्रत्येक कोठा छत वा कौसी, एक मिनी-पट्टी, उपग्रह टीवी, सहज बाथरूम छ। परिवार सुइट्स दुई बेडरूम समावेश, र लक्जरी कोठा एक विशाल छत र जक्यूजी संग ठूलो क्षेत्रमा छन्। होटल रेस्टुरेन्ट स्वादिष्ट लंच र डिनर गर्दछ, पर्यटक फरक भोजन, अचम्मको पेय र आरामदायक वातावरण प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ।
साइट मा एक विशाल आउटडोर पूल फैलिएको। साना आगंतुकों लागि रोमाञ्चक पानी स्लाइडहरू एक पूल निर्माण गरे। यो पनि ठूलो खेल मनोरञ्जन संग एक निजी समुद्र तट छ। यहाँ छुट्टी मा भएको होने, सबैलाई के गर्न केही पाउनुहुनेछ। र तपाईं सोध्न भने: "मलाई Hurghada मा एक राम्रो होटल भन्नुहोस्?" - अब तपाईं विश्वस्त Albatros महल5* सल्लाह। आखिर, यो जटिल अद्वितीय छ र सेवा को उच्चतम स्तर पारस्परिक रहेको छ।
एक्वा Vista Resort र स्पा
Hurghada मा राम्रो होटल सुन्दर र अनुपम लाल समुद्र छुट्टी यहाँ आदर्श अवस्था र सेवाको सुन्दर छाप लागि सम्झना गरिनेछ सम्पूर्ण तट साथ स्थित छ। एक्वा Vista Resort र स्पा - एक, आधुनिक सुन्दर र सहज होटल, को पूर्वी सबै भव्यता र subtlety संग साँचो मिश्रको शैलीमा डिजाइन। यो होटल जटिल परिवार छुट्टी को लागि एक उत्कृष्ट विचार, यहाँ विभिन्न अवस्था र स्थापित छ बच्चाहरु को लागि गतिविधिहरु र vzroslyh.Otel 252 मानक-प्रकार कोठा र 21 परिवार छ।
बाँकी दुई निर्मित लागि स्विमिंग पूल, त्यहाँ बारहरू र रेस्टुरेन्ट छन्। जस्तै एक्वा Vista Resort र स्पा रूपमा, Hurghada मा राम्रो होटल, मात्र होइन अवकाश लागि तर पनि व्यापार वार्ता र व्यापार सभाहरूमा लागि डिजाइन। बच्चाहरु को लागि, होटल एनिमेसन र मिनी-क्लब को एक किसिम संगठित, तपाईं पनि बच्चा सम्भालना सेवा फाइदा लिन सक्छ। बलौटे समुद्री तट, पानी स्लाइडहरू, खेल को मैदानों, फिटनेस र स्पा सुविधा - यो सबै Hurghada मा सबै भन्दा राम्रो होटल समावेश छ। फोटो यस अविश्वसनीय सुन्दर परिसर को एक ज्वलन्त तस्वीर देखाउँछ।
होटल4अभिजात वर्ग जीवन होटल (टर्की, Kemer)
टुनिशिया (Hammamet) मा बिदाहरू। Kheops एक्वा Resort: तस्बिर, मूल्यहरू र समीक्षा
गर्न सक्छन् म गर्भवती रेड वाइन: लाभ, हानि र विशेषज्ञ सल्लाह
सपना पुस्तक। गोही। के साँच्चै प्रतीक्षा?
प्राकृतिक र सांस्कृतिक आकर्षण - पोर्चुगल
यात्रु चेकबाट - यो के हो? यात्रु चेकबाट कसरी भुक्तानी गर्न र कहाँ किन्न?
सुनगाभा। यी आकर्षक फूल को प्रजनन
"सेतो भर्ने" टमाटर: मूल्य प्रजातिहरू र कृषि प्रविधी
उनको खुट्टामा Sprockets। रोकथाम। उपचार